पहिलो पटक सेक्स गर्दा दुख्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
पहिलो पटक सेक्स गर्दा दुख्छ ?
यौन क्रियाकलापमा भन्दा टेस्टेस्टेरोनले यौनेच्छा वा यौन व्यग्रतालाई बढी प्रभाव पारेको हुन्छ । महिलामा पनि टेस्टेस्टेरोनले नै यौनेच्छा वा यौन व्यग्रताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसमा इन्द्रियहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हाम्रा इन्द्रियहरू दृष्टि, स्पर्श, ध्वनि, गन्ध तथा स्वादसँग यौन सम्पर्क वा यौनेच्छासँग सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा त हामीलाई थाहै छ ।
यौन उत्तेजनाको स्रोत जेसुकै भए पनि अन्तिम रूपमा त्यसलाई अथ्याउने र बुझने कुरा मस्तिष्कले नै गरिरहेको हुन्छ । यौनसम्बन्धी हाम्रा भावनाहरू मस्तिष्कबाट सुरु हुन्छन् ।
सबै व्यक्तिमा एकैनासको यौनेच्छा हुँदैन, कसैमा बढी हुन्छ भने कसैमा कम । त्यसैगरी कुनै एक व्यक्तिमा पनि सधैं एकनासको यौनेच्छा हुँदैन । यसैगरी कतिपयलाई यौनसम्पर्क राख्न मन नलाग्ने स्थिति हुन सक्छ अर्थात् कम यौन इच्छा (hypoactive sexual desire) को स्थिति हुन सक्छ ।
याे पनि पढ्नुस मादक पदार्थ सेवनले वीर्यस्खलनमा समस्या ल्याउछ ?
यस्तो स्थितिमा यौनसम्पर्क राख्ने चाहना, यौन परिकल्पना तथा यौन क्रियाकलाप महिनाको दुई पटकभन्दा कम भएको अवस्थालाई जनाउँछ । तपाईंको मनबाट आउने यस्ता भावनाका बारेमा तपाईंलाई नै बढी थाहा हुन्छ, तर यसो भन्दैमा महिनामा एकपल्ट मात्र यौनसम्पर्क राख्ने जोडीलाई यो समस्याबाट पीडित भनी हाल्न मिल्दैन, यदि दुवै जना यसमा सन्तुष्ट छन् भने ।
याे पनि पढ्नुस याैनक्रियामा श्रीमती सन्तुष्ट भएको कसरी थाहा पाउने ?
यौनेच्छा पूरा गर्न व्यक्ति यौनसम्पर्कप्रति लालायित हुन्छ र त्यसका लागि प्रयास पनि गर्छ । प्रेमीसँग होस् वा अन्य व्यक्तिसँग कुनै पनि व्यक्तिका लागि पहिलो यौनसम्पर्क एउटा विशेष परिस्थिति वा घटना हो । यौनसम्पर्क नराखेको व्यक्तिवाट यौनसम्पर्क राखेको व्यक्ति हुनुको आफ्नै महत्व छ ।
व्यक्तिमा यस विषयमा चासो वा चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । यसको निर्णय गर्न सजिलो छैन । अध्ययन, पहिरन वा भोजन जस्तै यो विषयमा के रोज्ने भनेर खुलेर छलफल गर्ने स्थिति भने हुँदैन ।
दुख्ला कि ? : पहिलो यौनसम्पर्क राख्दा सबै महिलालाई दुख्छ नै भन्ने छैन । विशेष गरेर योनिच्छद (hymen) च्यातिने क्रममा कतिपयलाई केही पीडा अनुभव हुन सक्छ, तर यो योनिच्छदको स्थितिअनुसार हुन्छ । यौन सुखको परिप्रेक्ष्यमा यसमा कतिपयमा यो पीडाले खासै महत्व पाउँदैन । योनिमा पर्याप्त चिप्लोपन भए पछि लिङ्ग प्रवेश बिस्तारै–बिस्तारै धेरै जोड नलगाइ प्रवेश गराउनु आवश्यक हुन्छ । भयका कारणले योनिको मांसपेशी खुम्चिएको स्थितिमा भने पीडा हुन्छ ।
यौन कार्य सम्पादन : के मैले चाहेअनुरूप मेरो वा मेरो साथीको यौन चरमसुख प्राप्तिसम्म पुग्न सक्छु वा सक्दिनँ भन्ने चिन्ता हुन्छ । जस्तै पुरुषमा शीघ्र स्खलन वा लिङ्ग उत्तेजित नहुनु वा महिला योनि सुख्खा भएका कारणले यौन सम्पर्कलाई निरन्तरता दिन नसक्ने स्थिति हुन्छ । बिस्तारै, कोमलतापूर्वक तनावरहित ढंगमा यौन क्रियाकलाप अघि बढाए यस्तो समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । साप्ताहिकबाट
ट्याग्स: First Sex, sexual relation